Nhau - Simba rekunze LED Signs
Kutsvagurudza kunoratidza kuti ekunze LED signage inoita basa rakakosha mutengi kana anogona mutengi sarudzo yekudyidzana nebhizinesi rako.
Vanenge 73% yevatengi vakati vakapinda muchitoro kana bhizinesi ravakange vasina kumboshanyira kare zvichibva pachiratidzo charo chete.
Chiratidzo chako chekunze chinowanzo kuve chako chekutanga chekubata nemutengi, ndosaka zvichikosha kuti ugadzire chiratidzo chakajeka uye chinokwezva chinokwevera mutengi mukati uye chinoratidza ruzivo rwavachave narwo mukati.
Nezve 65% yevatengi vanotenda kuti chiratidzo chebhizinesi chinoratidza mhando yezvigadzirwa kana masevhisi, uye vanopfuura makumi mashanu muzana evanoongorora vakapindura vakaratidza kuti zvikwangwani zvakashata zvinovatadzisa kana kupinda munzvimbo yebhizinesi.
Kunyangwe chinhu chakanyanya kukosha kuve nechiratidzo chekunze chebhizimusi rako, zvinenge zvakaenzana zvakakosha kuti dhizaini dhizaini uye mhando zvioneke zvine mukurumbira. Sekutsvagurudza kunoitwa nekutsvagisa uku, zvikwangwani zvisina basa zvingangochengetedza vatengi vanogona kuvimba nebhizinesi rako. Kuti uve nechokwadi chekuti mabhizimusi ako ekunze ari kutyaira traffic yakawanda sezvinobvira, chinhu chakakosha kuita ndechekuti meseji yako ndeyechokwadi uye inomanikidza. Kana chiratidzo chako chiri kuratidza kumwe kupfeka uye kubvarura, iwe ungangodawo kufunga nezvekudyara mune imwe nyowani. Tarisa uone yedu sarudzo yekunze zviratidzo kuti uwane chiratidzo chakakwana chebhizinesi rako uye bhajeti yako.
Pedyo 59% yevatengi vakati kusavapo kwechiratidzo kunovatadzisa kupinda muchitoro kana mubhizinesi.
Pamwe iwe wakangotanga rako bhizinesi diki uye une zvakawanda mundiro yako. Kana kuti pamwe uri pasi pekufungidzira kuti kunze kwemasaini haisi mari inokosheswa. Zvisinei, nhamba iyi inodzokororazve kuti zvakakosha sei kuisa zviratidzo zvekunze pamberi. Pasina imwe, unogona kunge uchirasikirwa nebhizinesi uye unogona kunge uchiendesa kune vako vatengi vatengi kuti bhizinesi rako neimwe nzira harivimbike. Kukundwa nemabatirwo aungaitwa chiratidzo chekunze chebhizinesi rako? Zvibvunze mibvunzo iyi mishanu usati watenga kuti uve nechokwadi chekuti uchasarudza iyo chaiyo.
Inenge hafu, 50.7%, yevatengi veAmerica vakatyaira nebhizimusi raidikanwa vasina kuiwana nekuda kwemasaini akakwana.
Mukana wekuti mumwe munhu arikutsvaga mhando yezvigadzirwa zvaunotengesa kana sevhisi iwe yaunopa yakakwira, asi pasina chiratidzo, vachazokuwana sei? Kugadzira yakasarudzika, yemhando yepamusoro chiratidzo chekunze chebhizinesi rako chinokutendera iwe kwete kwete kungosimbisa nzvimbo yako kune vatengi, asiwo kuvaka chiziviso kuziva. Nenzira iyo, inotevera nguva iyo mutengi aine chaanoda chigadzirwa chako nemasevhisi, ivo vanozorangarira bhizinesi rako uye voziva chaizvo kwekuenda.
Kuverenga kusaina ndicho chiratidzo chakanyanya kukosha mukukonzera vatengi kuyedza chigadzirwa kana sevhisi yechitoro.
Vako vangangoita vatengi vakabatikana. Pasina kutaura kuti ivo vanogona kunge vakafashukira neakasiyana akasiyana ekushambadzira zuva nezuva. Kana chiratidzo chako chisingaverengeke, zvakachengeteka kutaura kuti havasi kuzononoka uye kuyedza kufunga kuti chii chauri kupa. Ndosaka zvakakosha kuti chiratidzo chako chiratidze zvauri uye zvaunoita nenzira yakajeka uye yakapfupika. Wongorora zviratidzo zvako kuti uone kuti zvinosanganisira chete ruzivo rwakanyanya kukosha nezve bhizinesi rako uye haruna kuzara nemameseji asina basa kana magirafu, uye kuti ruvara rwemashure nekunyora zviri nyore kuverenga.